बीपी प्रतिष्ठानबाटै बिरामी रेफर ! | गृहपृष्ठ
Home समाचार बीपी प्रतिष्ठानबाटै बिरामी रेफर !
बीपी प्रतिष्ठानबाटै बिरामी रेफर !
धरान । स्वास्थ्यसेवामा ‘रेफरल सेण्टर’को रूपमा स्थापित धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले दिँदै आएका सेवा गुणस्तरीय नहुँदा बिरामी अन्यत्रै रेफर हुनु परेको छ ।
दक्षिण एशियाकै दोस्रो ठूलो मानिएको प्रतिष्ठानमा प्रदेश नं. १ र २ का अस्पतालले उपचारका लागि रेफर गर्ने गर्दछन् । तर, प्रतिष्ठानमा आएका बिरामीहरू उपचार पाउन नसकेर आफै रेफर गराउँछन् भने कतिपय चिकित्सकले नै रेफर गरिदिन्छन् । रेफर हुँदा महँगो शुल्कमा उपचार गराउन आम नागरिक बाध्य छन् ।
धरान–१७ की १ वर्षीय बालिकाको उपचार गर्न सकिँदैन भन्दै बिहीवार बालरोग विभागका चिकित्सकले काठमाडौं लैजान रेफर गरे । घाँटीमा बदाम अड्किएर ल्याइएकी बालिका मरियम राईलाई विभागमा खटिएका चिकित्सकले रेफर गरिदिएको बालिकाका मामा मणि राईले बताए । बच्चाको लागि चेकजाँच गर्ने प्रविधि छैन भन्दै विराटनगर वा काठमाडौं लैजान रेफर गरेको उनले बताए । बच्चालाई पेडियाट्रिकमा पुर्‍याएपछि विभागमा खटिएका स्टाफले सिनियर डाक्टरलाई खबर गरेका थिए । तर, सिनियर डाक्टर नआउने देखिए पछि रेफर गरिएको राईले बताए ।
रेफर गरिएकी बालिकाको उपचार विराटनगरस्थित न्यु ग्रीन क्रश चिल्ड्रेन अस्पतालमा भयो । ४ ओटा एक्सरे गराउँदा समेत बालिकाको घाँटीमा केही देखिएन, तर उनका परिवारले भने एकैछिनमा करीब १० हजार रुपैयाँ खर्च व्यहोर्नुपर्‍यो ।
प्रतिष्ठानका प्रवक्ता प्रा.डा. पशुपति चौधरीले सबैखाले एक्सरे प्रतिष्ठानमा हुने दाबी गरे । कुनै पनि बिरामी अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउने उनको भनाइ छ । ‘बच्चाको पनि एक्सरे यहीँ हुन्छ । कसले रेफर गरेको हो, त्यसलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दलालहरूले बाहिर पठाउन खोजेको हुनसक्छ ।’
प्रतिष्ठानमा दैनिक ओपीडी सेवा लिन करीब २५ सय बिरामी आउँछन् भने आकस्मिक सेवामा दैनिक ५ सय बिरामी हुन्छन् । भर्ना भएर उपचार लिइरहेका करीब ७ सय बिरामी छन् । प्रतिष्ठानबाट दैनिकजसो करीब १ सय जना बिरामी बाहिर उपचारका लागि जाने गर्दछन् । ‘आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रतिष्ठानले सेवा सहज बनाउन सकेको छैन,’ स्थानीय अनुप योञ्जनले बताए ।